चीन उच्च गुणस्तर हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भ निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Hydrotech
हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भ एक साधारण संरचना र अनुप्रयोगहरूको एक धेरै फराकिलो दायराको साथ प्रवाह नियन्त्रण भल्भ हो। यो प्रायः राहत भल्भसँग मिलाएर विभिन्न प्रकारका थ्रोटल स्पीड रेगुलेटिङ सर्किट वा मात्रात्मक पम्प तेल आपूर्तिका लागि प्रणालीहरू बनाउँछ। विभिन्न सञ्चालन विधिहरू अनुसार, थ्रोटल भल्भलाई म्यानुअल समायोजन प्रकार साधारण थ्रोटल भल्भ, स्ट्रोक स्टप वा क्याम र अन्य मेकानिकल चल्ने भागहरू संचालित स्ट्रोक थ्रोटल भल्भ, आदिमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भलाई एकतर्फी भल्भ आदिसँग पनि जोड्न सकिन्छ। कम्पाउन्ड भल्भहरू जस्तै एकतर्फी थ्रॉटल भल्भ र एकतर्फी स्ट्रोक थ्रॉटल भल्भ।
2. हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भ संरचना
हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भको सरल संरचना, सानो आकार, सुविधाजनक प्रयोग र कम लागत छ। यस हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भको भल्भ पोर्टमा ठूलो समायोजन दायरा छ, र प्रवाह दर वाल्व पोर्ट अघि र पछि दबाव भिन्नता संग रैखिक छ। यो एक सानो स्थिर प्रवाह दर छ। यद्यपि, प्रवाह च्यानल एक निश्चित लम्बाइ छ र प्रवाह दर सजिलै तापमान र लोड द्वारा प्रभावित हुन्छ। तसर्थ, हाइड्रोटेकले तपाईंलाई बताउँछ कि यो हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भ थोरै तापक्रम र लोड परिवर्तन वा कम गति स्थिरता आवश्यकताहरू भएका हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको लागि मात्र उपयुक्त छ।
3. थ्रोटल को प्रयोग
प्रयोगहरूले देखाउँछन् कि जब हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भले सानो खोल्ने क्षेत्रसँग काम गरिरहेको छ, यद्यपि दबाव भिन्नता र तेलको चिपचिपाहट भल्भ अघि र पछि अपरिवर्तित रहन्छ, भल्भ मार्फत प्रवाह आवधिक रूपमा समय-समयमा पल्सेट हुनेछ। समय। घटना, उद्घाटन डिग्रीको क्रमिक कमी संग, प्रवाह पल्सेशन परिवर्तन तीव्र हुन्छ, र बीचमा कट-अफ पनि हुन्छ, जसले गर्दा थ्रोटल भल्भले पूर्ण रूपमा आफ्नो काम गर्ने क्षमता गुमाउँछ। माथिको घटनालाई थ्रोटल भल्भको क्लोजिङ घटना भनिन्छ। थ्रॉटल भल्भको क्लोजिङ घटनाले सानो प्रवाह दरमा काम गर्दा हाइड्रोलिक थ्रॉटल भल्भको प्रवाहलाई अस्थिर बनाउँछ, जसले एक्ट्युएटरको क्रलिङ घटना निम्त्याउँछ। त्यसकारण, हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भको न्यूनतम प्रवाह सीमा हुनुपर्छ जुन सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छ। यो सीमालाई थ्रोटल भल्भको न्यूनतम स्थिर प्रवाह दर भनिन्छ, र यो प्रणालीमा actuator को न्यूनतम स्थिर गति सीमित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
4. हाइड्रोलिक थ्रोटलका लागि अन्य नोटहरू
(१) हाइड्रोलिक थ्रॉटल भल्भ एक भल्भ हो जसले थ्रोटल खण्ड वा थ्रोटल लम्बाइ परिवर्तन गरेर तरल पदार्थको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दछ। एकतर्फी थ्रोटल भल्भ बनाउनको लागि थ्रॉटल भल्भ र एकतर्फी भल्भलाई समानान्तरमा जडान गर्नुहोस्। थ्रोटल भल्भ र एकतर्फी थ्रोटल भल्भ सरल प्रवाह नियन्त्रण भल्भ हुन्। एक निश्चित पम्पको हाइड्रोलिक प्रणालीमा, थ्रोटल भल्भ र ओभरफ्लो भल्भलाई तीन थ्रॉटल स्पीड कन्ट्रोल सिस्टम बनाउनको लागि जोड्न सकिन्छ, त्यो हो, तेल इनलेटको थ्रोटल गति नियन्त्रण प्रणाली। प्रणाली, तेल रिटर्न लाइन थ्रॉटलिंग गति नियन्त्रण प्रणाली र बाइपास थ्रॉटलिंग गति नियन्त्रण प्रणाली।
(2) हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भमा कुनै प्रवाह नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकार्य छैन र लोड परिवर्तनहरूको कारणले अस्थिर गतिको लागि क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन। सामान्यतया, यो केवल अवसरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ जहाँ लोड थोरै परिवर्तन हुन्छ वा गति स्थिरता उच्च छैन। एक हाइड्रोलिक दबाव नियन्त्रण भल्भ। हाइड्रोलिक उपकरणहरूमा, यसले मुख्य रूपमा निरन्तर दबाव ओभरफ्लो र सुरक्षा सुरक्षाको भूमिका खेल्छ।
(3) हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भको प्रदर्शन आवश्यकताहरू हुन्: 1. ठूलो प्रवाह समायोजन दायरा, सहज प्रवाह दबाव भिन्नता; सानो आन्तरिक चुहावट, यदि बाह्य चुहावट पोर्ट छ भने, बाह्य चुहावट पनि सानो हुनुपर्छ; समायोजन टोक़ सानो छ, कार्य संवेदनशील।
हट ट्याग: हाइड्रोलिक थ्रोटल भल्भ, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, चीन, मूल्य